ပညာရေးမှာ အရမ်းထူးချွန်ပြီး အသက်ငယ်ငယ်ေ လးနဲ့ဆုတံဆိပ်တွေများစွာရရှိထားတဲ့ ချစ် တူမလေးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့ တီတီပပဝင်းခင် - Myannewsmedia
မငျးသမီးခြောပပဝငျးခငျ ကတော့ တဈခြိနျကအောငျမွငျခဲ့တဲ့အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပွီး ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာအပီပွငျသရုပျဆောငျနိုငျကာ မွနျမာဖကျရှငျလေးတှကေိုသာအမွတျတနိုးနဲ့ဝတျဆငျလရှေိ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။မွနျမာဝတျစုံလေးဝတျဆငျပွီး ဆံပငျအရှညျလေးနဲ့ အရမျးခဈြစရာကောငျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှသေညျးသညျးလှုပျခဈြခငျအားပေးခဲ့ရတဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့အနညျးငယျဝေးကှာလကျြရှိနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ ပညာရေးမှာ အရမျးထူးခြှနျပွီး အသကျငယျငယျလေးနဲ့ဆုတံဆိပျတှမြေားစှာရရှိထားတဲ့ ခဈြတူမလေးအတှကျ ဝမျးသာဂုဏျယူနခေဲ့ပါတယျ။ သူမကတော့ ” Congratulations and Thanks my lovely Kwi. So proud for your win. Year 3, Ruby , Academic Excellence Award,Poem Reading & Story Reading Awardees.ခုလို ဘဝမှာ ဆုတှအေမြားကွီးရပွီး ကှိလေးထူးခြှနျသောပညာတတျကွီးဖွဈပါစေ …အကောငျးအဆိုး , အမှားအမှနျ ခှဲခွားနိုငျသော ဉာဏျပညာရှိပါစေ “ဆိုပွီးလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသား ထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ ” ဘာသာရေး ကိုငျးရှိုငျးပွီး မိဘအပျေါ သိတတျလိမ်မာ ပွုစုလုပျကြှေးသော မိနျးမကောငျးလေးဖွဈပါစေ လိမ်မာပွီး brightဖွဈသော တူမတျော ကှိ ကိုယျနဲ့ တူခငျြတာလို့ အမွဲပွောတဲ့ ကှိ ခု ကိုယျ့လို ဆံပငျအရှညျလေးထားနပွေီတဲ့ ဆာမကွီးက “ဆိုပွီး ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မငျးသမီးခြောပပဝငျးခငျတို့တူဝရီးနှဈ ယောကျရဲ့ ပြျောရှငျနကွေတဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေိုပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Source: myanmar load
မင်းသမီးချောပပဝင်းခင်ကတော့ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာအပီပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ကာ မြန်မာဖက်ရှင်လေးတွေကိုသာအမြတ်တနိုးနဲ့ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဝ တ်စုံလေးဝတ်ဆင်ပြီး ဆံပင်အရှည်လေးနဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေသည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ရတဲ့ သူမကတော့ ယခုမှာ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အနည်းငယ်ဝေးကွာလျက်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ပညာရေးမှာ အရမ်းထူးချွန်ပြီး အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆုတံဆိပ်တွေများစွာရရှိထားတဲ့ ချစ်တူမလေးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ” Congratulations and Thanks my lovely Kwi. So proud for your win. Year 3, Ruby , Academic Excellence Award,Poem Reading & Story Reading Awardees.ခုလို ဘဝမှာ ဆုတွေအများကြီးရပြီး ကွိလေးထူးချွန်သောပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေ …အကောင်းအဆိုး , အမှားအမှန် ခွဲခြားနိုင်သော ဉာဏ်ပညာရှိပါစေ “ဆိုပြီးလူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ” ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းပြီး မိဘအပေါ် သိတတ်လိမ္မာ ပြုစု လုပ်ကျွေးသော မိန်းမကောင်းလေးဖြစ်ပါစေ လိမ္မာပြီး brightဖြစ်သော တူမတော် ကွိ ကိုယ်နဲ့ တူချင်တာလို့ အမြဲပြောတဲ့ ကွိ ခု ကိုယ့်လို ဆံပင်အရှည်လေးထားနေပြီတဲ့ ဆာမကြီးက “ဆိုပြီး ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ေ တွအတွက် မင်းသမီးချောပပဝင်းခင်တို့တူဝရီးနှစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Previous post ဇိမ်ခံ သင်္ဘောကြီးနဲ့ခရီးသွားရင်း နှစ်ပေါင်းများ စွာကွဲ ကွာနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ရီရီနဲ့ပြ န်တွေ့ရလို့ အတိုင်းမသိပျော်ရွှ င်နေတဲ့ ယုသန္တာတင်
Next post အလုပ်တွေ မနားမနေလုပ်ရလို့ ပင်ပန်းနေချိ န်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေက သီချင်းဆိုကာ အားပေးနေကြတာကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ရွှေကစ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး